celebrity. new – Page 46 – ဘ၀ ဒသန
သတင်းထွက်နေတဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စကို အလှမယ် ထားထက်ထက် ဖြေရှင်
သတင်းထွက်နေတဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စကို အလှမယ် ထားထက်ထက် ဖြေရှင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းထွက်နေတဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စကို အလှမယ် ထားထက်ထက် ဖြေရှင်းလာ ဖေဖော်ဝါရီမှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီနောက် ပြည်သူတွေနှင့်ရပ်တည်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ၅၀၅ (က)ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ ထားထက်ထက်ကိုတော့သိကြမှာပါနော်။ ဧပြီလကတည်းက တောထဲမှာ စစ်ပညာသင်ကြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းလေးကမှ ဖခင်တစ်ယောက်လုံးကို ဆုံးရှုံးထားရတာဖြစ်ပြီး ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ဆက်လျှောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ထားထက်ထက်က “ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာ လူသိ ရှင်ကြားရှင်းရမယ့် ကိစ္စလို့ကို မထင်ပါဘူး…Sponsor ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတွက် ဒီစာစုကို Read more
ဖခင်ကြီး (၁)လ ပြည့် လပတ်အ တွက် ဆွမ်းကပ် အလှူလေး ကပ်လှူခဲ့တဲ့ လင်းအောင်ခေတ်…. ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော လင်းအောင်ခေတ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေ းကတော့ ဖခင်ကြီး အတွက်ရည်စူးပြီးပြုလုပ်တဲ့ အလှူလေးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့My Day ကနေ အလှူလေ းပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့တ ာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းအောင်ခေတ်ရဲ့ ဖခင်ကြီးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လက ဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီ နေပမှာဆိုရင်တော့ တစ်လပြည့် လပတ်လ ည်တဲ့နေ့လေး ကျရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ကို ပထမဆုံးမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုး ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ မန်ကဖြန် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ မနက်ဖြန် ကျရောက်မယ့်မွေးနေ့ရက်လေးမှာ အသက် (၃၀)တိတိကိုပြည့်ပြည့်မြောက်မယ့် မွေးနေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နီနီရဲ့ မနက်ဖြန်မှာကျရောက်မယ့် မွေးနေ့ရက်မြတ်အတွက်ကိုတော့ ခင်ရတနာစိုးက ဒီနေ့ကတည်းကနေ ကြိုတင်ပြီး အခုလိုပဲ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။ “Happy Birthday ပါမမ။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ အမြဲပြည့်စုံပါစေ။” ဆိုပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more
မိခင်ကြီး တစ်လပြည့်လပတ်လည်အတွက် အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော် ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်အဆိုတော် တင်ဇာမော်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူရဲ့မိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သားတာ လပတ်လည်တဲ့ နေ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် မိခင်ကြီးအတွက် ရည်စူးပြီး ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွမ်းကပ်အလှူလေးကိုတော့ လယ်တီဝိပဿနာကျောင်းတိုက်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို တင်ဇာမော်က “ဒီနေ့ မေမေ ဘဝတစ်ပါးကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာ တစ်လ ပြည့်လို့ လယ်တီဝိပဿနာကျောင်းတိုက် မှ ရဟန်းသံဃာ၊ မယ်သီလရှင် နှင့် ယောဂီ များ အားလုံးကို နို့ခေါက်ဆွဲ နှင့် မန်းမြို့တော်ပေါက်စီ တို့ကို အာရုဏ်ဆွမ်းအဖြစ် Read more
ပြည်သူတွေအတွက် ဆန်တွေထပ်မံလှူဒါန်းပေးလိုက်ပြန်တဲ့ မမဆောင်း
ပြည်သူတွေအတွက် ဆန်တွေထပ်မံလှူဒါန်းပေးလိုက်ပြန်တဲ့ မမဆောင်း ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော မမဆောင်းကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း အလှူလေးတစ်ခုကို ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မမဆော င်းကတော့ ဒီနေ့အလှူလေးက ဆန်အလှူလေးဖြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြည်သူတွေအတွက် ရည် ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်အလှူလေးကိုလည်း မမဆောင်းက ဝေဠုကျော်ရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ သွားရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မမဆောင်းက ခုကာလမှာ ကိုဗစ်ကြေ ာင့် ဆုံးပါးသွားတဲ့ သူ့ရဲ့အကိုနှစ်ယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဝေဠုကျော်ရဲ့ ဖောင်ဒေးးရှင်းမှာ ဆန်လှူဒါန်းပေးဖို့အတွက် (၅)သိန်းကျပ်ကို နဲ့ သူ့ရဲ့ We Read more
ပရိတ်သတ်တွေ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ အဆိုတော်ပိုပိုရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေ အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော Hu Go ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်ရက်နေ့ကတည်းက တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hu Goဟာ အဆိုတော်ပိုပိုနဲ့လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ ပိုပိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့ အချိန်တည်းကစကာ ပိုပိုနဲ့ပက်သက်တဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိသူပါ။ အဆိုတော်ပိုပိုဟာ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရသူဖြစ်ပြီး ဧပြီလထဲမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ပိုပိုနဲ့အတူ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေများစွာလည်း ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတစ်ကျော့ပြန် လည်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် Read more
စိန်ဖူးတော်အတွက် သူပိုင်ဆိုင် တဲ့ ကျောက် မြတ် ရတနာတွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
စိန်ဖူးတော်အတွက် သူပိုင်ဆိုင် တဲ့ ကျောက် မြတ် ရတနာတွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန် ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆို တော် ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ ဒီနေ့မှာ စိန်ဖူးတော်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရွှေရည်သိန်းတန်က တော့ အလှူ အတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောပြီး ဘုရာတရားနဲ့ ဘာသာရေးကို ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း ရွှေရည်သိန်းတန်က စိန်ဖူး တော်အတွက် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကျောက်မြတ်ရတနာတွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရည်သိန်းတန်က သူရဲ့ မွန်မြတ် လှတဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတ်တွေလည်း Read more
မွေးနေ့လ က်ဆောင် အ ကိတ်ကြီးေ ကြာင့် အတိုင်းမသိဝမ်း သာပျေ ာ်ရွှင်နေပါပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးသီတာ
မွေးနေ့လ က်ဆောင် အ ကိတ်ကြီးေ ကြာင့် အတိုင်းမသိဝမ်း သာပျေ ာ်ရွှင်နေပါပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးသီတာ မွေးနေ့လက်ဆောင် အကိတ်ကြီးကြောင့် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပါပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးသီတာ.. ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆေ ာင်အေးသီတာကတော့ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပီပြ င်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဇာတ်ပို့ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်အေးသီတာကတော့အလှူ အတန်းလည်းရက်ရောပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလိုအပ် တဲ့သူတွေဆီလှူဒါန်းပေးနေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုကာလကြီးမှာရိုတ်ကူးရေးတွေရပ်နားထားရတ ာကြောင့်အေးသီတာကတော့ ဆန်နဲအခြားစားသောက် တွေကိုလိုင်းပေါ်ကနေရောင်းချပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါ တယ်။အနုပညာရှင်အချို့နဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဝယ် ယူအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့အေးသီ တာကဝမ်းသာစရာအရာလေးကိုချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေ ဆီမျှဝေလာ တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ချစ်ရတဲ့ သူဆီကမွေးနေ့အကြိုအဖြစ်တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင် ကြီးရရှိခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။အေးသီတာကအကြို မွေးနေ့လက်ဆောင်တဲ့ကျေးဇူးပါချစ်လေးဆိုပြီး မျှဝေလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံစားခဲ့ရပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ တဲ့ သရုပ်ဆောင်နွယ်နီ ကို စားသောက်ကုန်နဲ့ လိုအပ်တာတွေ သွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံစားခဲ့ရပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ တဲ့ သရုပ်ဆောင်နွယ်နီ ကို စားသောက်ကုန်နဲ့ လိုအပ်တာတွေ သွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရဟိတမင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ပြည်သူ တွေကြား ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ဝေဠုကျော်ကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ ဝေဠုကျော်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ အခက်အခဲတွေနဲ့ လိုအပ်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အင်တိုက်အား တိုက်နဲ့ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီနေတဲ့ ဝေဠုကျော်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်မနွယ်နီအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ မနွယ်နီကတော့ ကင်ဆာရောဂါ Read more
သားလေးနဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့ အမှတ်တရပုံတွေပြန်တင်ပေးလာရင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သတိရပြီးဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း..
သားလေးနဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့ အမှတ်တရပုံတွေပြန်တင်ပေးလာရင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သတိရပြီးဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း.. နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ပူပူနွေးနွေးဆုံးရှုံးထားရပြီး သူမကိုယ် တိုင်လည်း ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကိုခံစားထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ပရိသတ်တွေကလည်း ကိုယ်ချင်းစာနာကြရင်း ထပ်တူဝမ်းနည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်တို့ဇနီးမောင်နှံက ရှေ့သွားနောက်လိုက်အရမ်းညီပြီး တစ်ယေ ာက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်သက်တမ်းက (၄)နှစ်ရှိပြီး သားတစ်ယောက်၊သမီးတစ်ယောက် ထွန်းကားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်က ချစ်ခင်ပွန်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်း စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သွားနိုင်အောင် သူမကိုယ်တိုင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သားလေးနဲ့သမီးလေးရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံးရှင်သန်သွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း သူမတို့သားအမိတွေကို လိုက် စောင့်ရှောက်ပေးမှာဆိုပြီး အားပေးစကားတွေပြောထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Read more